Tsy manaraka l�jika
�Mampiana-dratsy ny tanora ny mpanao politika�
�Hijanona aho�, �Tsy hiala aho !�, �Tsy firaharahana ny sonia natao�. �Fampianaran-dratsin�ny mpanao politika ny tanora Malagasy avokoa ireo�, hoy Atoa Fulgence, mpandala ny federalisma sady mpitarika ny fikambanana
Lire la suite...	Diniky ny telo tonta
Misy ny zavatra mampiahiahy
Nitohy omaly teny amin�ny ministeran�ny fiarovam-pirenena Ampahibe ny diniky ny telo tonta, nahitana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM), ny Komity mpanara-maso ny fampiharana ny tondrozotra (CSC) ary ny foloalindahy.
Lire la suite...	Donak'afo : Fahasahiranana manara-penitra
Nibaradaka ny mpandraharaha fa mbola tsy sahirana tahaka ny tamin�izao krizy izao. Izay no nambaran�ny FIVMPAMA na ny Fivondronan�ny Mpandraharaha Malagasy omaly nandritra ny fanokafana tamin�ny fomba ofisialy ny FIM na Foire Internationale de Madagascar.
Lire la suite...	Fametram-pialan�ireo kandida
Nilaza ny heviny ny CES
Lire la suite...	Fanavotana an�i Madagasikara
�Omeo ny tantsaha ny baolina !�
Mahamenatra ny zava-misy eto amintsika, hoy i Rado Ramparaoelina, Ben�ny tananan�ny Kaominina Ampitatafika, Antananarivo Atsimondrano, raha naneho ny heviny mikasika ny fitsabahan�ireo teratany vahiny loatra amin�ny raharaham-pirenentsika izy.
Lire la suite...	Fleury Rakotomalala
Tokony ho tonga saina ny vahoaka Malagasy
Teny fampieritreretana ny Malagasy rehetra no nataon�ny kandida Fleury Rakotomalala nandritra ny hetsika nokarakarain�ny antoko MIAMI tany Ambatondrazaka omaly.
Lire la suite...	Kohen Rivo Lala �Rafitra satanika no iainana eto�
10/05/2012 Ireo izay mandinika tsara ny fanapahan-kevitra na ny fanambarana ataon�ny fitondrana tetezamita dia mahatsikaraitra fa maro be ny zavatra tsy manaraka ny l�jika mihitsy ary indraindray aza misy fanapahan-kevitra roa mifanohitra raisin�ny fitondram-panjakana.
Tsy mba misy fifampitam-baovao mihitsy ve eo amin’ireo ministera na sampandraharaham-panjakana, sa misy tsotra izao ny mifanipy hoditr’akondro sa dia tena ao anatin’ny fahamaikana foana no andraisana fanapahan-kevitra ka izay fidonany any fotsiny, sa ve sanatria tena tsy fahaiza-miasa mihitsy ilay izy ? Farany teo izao dia nosamborina teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato indray ilay teratany Amerikanina, John Ferry. Namana akaikin’i Tojo Ravalomanana izy io, ary nambaran’ny mpitandro ny filaminana Malagasy fa hoe mersenera na mpikarama an’ady. Hentitra dia hentitra mihitsy ny fanazavan’ny manampahefana tamin’izany fa mersenera i John Ferry ka dia nokarohana sy nosamborina.
Natao fanadihadiana ary avy eo nalefa niverina tany Afrika Atsimo. Raha ny fahafantarana ny mersenera na mpikarama an’ady dia manana anton-dia mazava, ka na io hanakorontana, na hanongam-panjakana, na hamono ho faty olona ambony na mpandraharaha manana ny maha izy azy. Izay no asany ary izay no hanakaramana azy. Moa ve raha nanadihady an’i John Ferry tamin’ny herintaona ny mpitandro ny filaminana dia nahavita nanaporofo fa hanao ny iray tamin’ireo iraka voatonona tetsy ambony ireo izy ? Raha eny nahoana no tsy nosamborina dia notsaraina dia nogadraina tahaka ny mitranga any amin’ny firenena rehetra ? Raha tsia, nahoana no mbola nanaovana fanadihadiana indray izy rehefa tonga teto dia navela niditra malalaka, dia asa ho samborina indray rehefa hiverina any Afrika Atsimo ? Tahaka izany koa ny raharaha Tojo Ravalomanana, nambara fa nahitana rongony tao Manjakatompo Antsirabe, trano fonenan’ity zanaky ny filoha teo aloha ity. Tsy hita akory anefa izay tohin’ilay raharaha.
Dia inona izany no antony nisavana ilay trano ? Mbola ao anatin’ny fanapahan-kevitra tsy manaraka lôjika koa ny fanomezana alalana ny fanondranana volamena, andro visivitsy aorian’izay dia mivoaka indray ny didim-panjakana mandrara ny fanondranana volamena. Efa miredareda be ny fitakian’ny SEMPAMA vao may volon-tratra miezaka mamono afo, vao nanomboka anefa ilay izy nodiana tsy hita. Midehaka manamboatra sy mitokana lalana, ny olan’ny mpitatitra amin’ny resaka solika anefa tsy mety voavaha. Amboarina ny hopitaly manara-penitra, ny vidin’ny fanafody anefa lafo dia lafo, ireo CSB koa mikatona tsikelikely. Be loatra ireo fanapahan-kevitra tsy manaraka ny lôjika raisin’ny fitondrana tetezamita ka tsy mahagaga raha miha mafy ny krizy e !